José Javier Abasolo. Wareysi lala yeeshay qoraaga Version original | Suugaanta Hadda
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 14/09/2021 12:00 | Wareysiyada, Qorayaasha, Buugaag
Sawir: José Javier Abasolo. Facebook profile.
Jose Javier Abasolo (Bilbao, 1957) waxay suuqa ku leedahay sheeko cusub, Nooca asalka ah, halkaas oo uu ku noqdo dabeecadiisii Mikel Goikoetxea kiis kale oo cusub oo leh shineemada adduunka gadaasheeda. Waa tii ugu dambaysay ururinta wanaagsan ee cinwaannada noocyada madow ee gadaashiisa sida Iftiinka Dhimatay, Dhaartii Whitechapel ama Qabrigii Yeruusaalem, kuwo badan. Runtii aad baan u bogaadinayaa waqtigaaga iyo naxariistaada aad i siisay tan wareysi.
José Javier Abasolo - Wareysi
SUUQA HADDA Nooca asalka ah waa sheekadaada cusub. Maxaad nooga sheegeysaa arrintaas iyo sidee Mikel Goikoetxea u qabtaa sidii baare khaas ah?
JOSÉ JAVIER ABASOLO: Sheekadu waxay bilaabmaysaa marka Goiko waxaa shaqaaleysiiya shirkad soo saarta inuu noqdo la taliyaha a filim taas oo laga duubayo qaar dambiyada ka dhacay Bilbao Labaatan sano ka hor, waxa saxaafaddu ugu yeertay "dambiyadii iskutallaabta fallaadhaha leh."
Mabda 'ahaan, waa dib u noqosho inay aqbalaan dalabka, maxaa yeelay taasi waa tan kaliya kiis aan la xalin karin markii uu ahaa Ertzaina, laakiin dhanka kale wuxuu u arkaa inay tahay a fursad dib loogu furo si qarsoodi ah uga baaraandegaan dilalka qaarkood oo wali ku sii socda. In kasta oo marka uu garto in isu ekaanshaha wixii dhacay iyo filimka (oo halkii Bilbao lagu dhigay gobol lumay Alabama, USA) uu aad u fog yahay, haddana ma qarin doono xanaaqiisa.
Maadaama baare Goiko uu aad u fiican yahay, maaddaama uu jecel yahay inuu ku ciyaaro xeerarkiisa oo uu yahay mid aan anshax lahayn, laakiin mararka qaarkood wuxuu seegaa tas -hiilaadka ay u shaqaynta koox ahaan siin karaan isaga iyo habab badan oo ka badan inta uu keligiis haysto.
AL: Ma xasuusan kartaa buuggaas koowaad ee aad aqriso? Iyo sheekadii ugu horeysay ee aad qortay?
JJA: Waxaan xusuustaa ururinta ku habboon shaqooyinka suugaanta ee caadiga ah ee carruurta, dhexdeeda ayaan awooday inaan wax ku akhriyo El Lazarillo de Tormes, El Cantar de Mío Cid, Don Quixote iyo Corazónwaxaa qoray Edmundo de Amicis. Markii aan ogaaday markii aan weynaaday in kan dambe lagu daray Tusaha Buugaagta Xaaraanta ah ee Kaniisadda, waan rumaysan kari waayay.
Ku saabsan waxa ugu horreeya ee aan qoray - ama, halkii, aan isku dayay inaan qoro -, waxaan u malaynayaa inay ahayd isku day lagu sameeyay riwaayad aan caadi ahayn oo la qaaday qarnigii XNUMX -aad (Maxaan samaynaynaa, waxaan ka tirsanahay qarnigii hore), laakiin ma hayo. Nasiib wanaag.
AL: Qoraa madax ah? Waxaad ka dooran kartaa wax ka badan hal iyo dhammaan waayihii.
JJA: Way adag tahay in laga jawaabo, sababtoo ah waxay sidoo kale beddeli kartaa iyadoo ku xiran maalinta ama niyadda. Laakiin anigoo si xamaasad leh u leh nooca madow, waxaan si joogto ah u akhriyaa kuwa waaweyn sida Raymond Chandler ama Dashiell Hammett. Waan ogahay inay u egtahay mowduuc weyn, laakiin waxaan u maleynayaa in kiiskan uu yahay mowduuc aad loo aasaasay.
Ka baxsan nooca madow, Pio Baroja. Oo runtii waan ku raaxeystay kaftanka Woodhouse iyo Jardiel Poncela.
AL: Waa kuwee dabeecadda buugga aad jeclaan lahayd inaad la kulanto oo aad abuurto?
JJA: Sidii aan idhi markii aan ka jawaabayay su’aashii hore, way adag tahay in laga jawaabo, maxaa yeelay waxay ku xidhan tahay waxa aan akhrinayo ama niyadayda, maalinba maalinta ka dambaysa waan isku beddeli karaa, laakiin malaha waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo halyeyga sheekada Pío Baroja , Zalacaín hiwaayadda.
Sida jilayaasha aan jeclaan lahaa inaan abuuro, Waxaan dejiyaa kuwa aan hore u abuuray. Ma aha inay ka fiican yihiin ama ka xiiso badan yihiin kuwa kale, laakiin waa inay qayb iga yihiin.
AL: Caadooyin ama caadooyin gaar ah markay tahay qorista ama akhriska?
JJA: Midna si gaar ah, in kasta oo maadaama ay ii sheegeen in lahaanshaha maaniyadu marka ay wax qorayaan ay u dhawaaqayso “suugaan aad u badan”, inta badan sidaas ayaan dhahaa Waxaan haystaa maan -galnimada ah inaanan lahayn maanso.
AL: Iyo meesha aad doorbidayso iyo waqtiga aad ku qabanayso?
JJA: Ka hor inta aanan qorin inta badan galabtii iyo habeenkii, laakiin tan iyo markii aan hawlgabay Ma lihi dookhyo, daqiiqad kasta way fiicnaan kartaa. Dabcan, waxaan isku dayaa inaan maalin walba waqti qaato si aan u sameeyo. Oo maadaama aanan jeclayn inaan keligay go'doomiyo, oo aanan keligay keligay xafiis ka samaysan gurigayga, Caadi ahaan waxaan qaadaa laptop -kayga qolka fadhiga. Markii carruurtaydu yarayd waxaan u bartay in aan wax ku qoro dhexda buuqa ay sameeyeen marka ay ciyaarayaan aniguna si aan dhib lahayn ayaan ula qabsaday. Hadda xitaa waan u xiisay waqtiga qorista.
AL: Ma jiraan noocyo kale oo aad jeceshahay?
JJA: Uma maleynayo inay jiraan noocyo wanaagsan ama xun, laakiin sheekooyin wanaagsan ama xun, iyada oo aan loo eegin nooca loo nisbeyn karo, laakiin maadaama aanan dhib u qabin inaan qoyo waa inaan qiraa inaan haysto daciifnimada khayaaliga sayniska (Waxaan waligay ahaan jiray Asimovian) iyo isaga hiddaha taariikhiga ahLaakiin uma jeedo kan ka hadlaya boqorrada waaweyn iyo jeneraallada, laakiin waa midka xoogga saaraya "dhibbaneyaasha" taariikhda.
AL: Maxaad akhrinaysaa hadda? Iyo qoraal?
JJA: En Basque Waxaan dib u akhrinayaa Greta, ee Jason osoro, Riwaayad aad u xiiso badan oo aan u malaynayo inaan lagu turjumin Isbaanish, nasiib darro. Iyo gudaha Castilian Waxaan bilaabay inaan wax akhriyo Habeen ka baxby Thomas Jooji, oo aan ka helay Toddobaadkii Madow ee ugu dambeeyay Gijón. Waa riwaayad uu qoray qoraa aanan garanayn oo lagu daabacay ururinta Júcar ee ururinta Calaamadda Madow, taas oo i siisa kalsooni.
Sida qorista, in ka badan qoritaan ayaan ahay anigoo qoraya sheeko aan rabo inaan ku dhigo Bilbao, intii uu socday dagaalkii sokeeye, dhawr maalmood ka hor intii aysan ciidamadii Franco qabsadeen magaalada.
KUWII: Sidee u malaynaysaa muuqaalka daabacaaddu?
JJA: Runtu waa taas Ma ihi qof aqoon badan dhinacyadaas. Sannado badan ayaan ku daabacay laba aqal oo wax lagu daabaco oo Basque ah, badiyaa EREIN iyo weliba TXERTOA, inkasta oo midkan si kadis ah. Laga soo bilaabo markii ay i dulqaateen oo ay i sii aamineen, waa inaan u maleeyaa in rajadu wanaagsan tahay.
Oo si guud u hadlaya, waxay u muuqataa in la daabaco wax badan, taas oo aniga ii leh macno wanaagsan, in kasta oo aan helo aragti ah in kan dambe uusan qof walba igu raacsanayn. Iyo, iyadoo la ixtiraamayo dhammaan, waxaan u malaynayaa inay taasi tahay mowqif khaldan, maxaa yeelay tayada badanaa waxay ka timaadaa tirada.
AL: Waqtiga dhibaatada aan la kulanay ma adigaa kugu adag mise waxaad awoodi doontaa inaad wax wanaagsan ku hayso sheekooyinka mustaqbalka?
JJA: Waxaan u malaynayaa sida ugu adag sida muwaadiniinta kale. Nasiib wanaag, dadka igu dhow, ma jiraan dhibaatooyin daran oo ka dhashay covid -ka, laakiin tani weli ma dhammaan oo waa inaan sii wadnaa ilaalinta taxaddarrada, inkasta oo tallaallada la moodo in aan bilownay inaan ka baxno tunnel -ka.
Laakiin haddii aan haysto wax wanaagsan oo aan ku qoro sheeko, hadda waan u oggolaan doonaa inay dhaafto, Ma i soo jiitay inaan wax ka qoro masiibada, in kasta oo aan qofku marnaba garanayn waxa mustaqbalku yeelan karo, markaa anigu si toos ah uma xukumo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Wareysiyada » José Javier Abasolo. Wareysi lala yeeshay qoraaga Original Version